Nagu saabsan - Shijiazhuang Tefeng Trading Co., Ltd.
Shijiazhuang Tefeng Trading Co., Ltd. Waxaan ku dhegannahay mabda'a ganacsiga ee "Faallooyinka la aqbali karo ee soosaarka iyo adeegga tayo sare leh", oo sidaas awgeed waxaan bixinnaa adeeg hawleed gebi ahaanba naqshadeynta badeecada, horumarinta, soo saarista, rakibida iyo adeegga iibka ka dib. macaamiisha leh farsamooyinka heerka koowaad ee wax soo saarka heerka-sare. Shirkaddeenna waxaa la siiyay cinwaanka "Alaab soo saareed oo la isku halleyn karo iyo Adeeg Bixiyaal ah" by isticmaaleyaal badan. Waxaan sidoo kale sii wadnaa kobcinta ku saleysan heerka maaraynta heerka sare iyo miyirka horumarka horumarsan si aan mashiinkeenna u keeno suuqyada gudaha iyo dibadaba. Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa iskaashigaaga mustaqbalka waxaan si diiran u soo dhaweynaynaa imaatinkaaga si aan u dhisno mustaqbalkeena quruxda badan.
Waqtiga xaadirka ah, shirkadda waxay leedahay laba wax soo saar ganacsi:
Marka hore, mashiinka kala saarida abuur.
Inta badan waxaa ka mid ah: nadiifiyeha shaashadda hawada, nadiifiye culeys gaar ah, dharbaax nooc gaar ah oo ka saaraya dhagaxa, mashiinka xarkaha, mashiinka kala-saarista, iyo dhammaan miraha abuurka iyo mashiinnada wax soosaarka beeraha ee ay leeyihiin qalabka imtixaanka caalamiga ah. Waxay leeyihiin tayo deggan, fulin dhammaystiran iyo farsamo horumarsan.
Midda labaad, mashiinka alxanka mesh alxanka.
Gaarka ah waxay leeyihiin xariiq soosaarista gole 3D, mashiinka alxanka mesh alxanka, qalabka alxanka mesh alwaax, qadka wax soo saarka gudiga EPS, mashiinka alxanka alwaaxa (bevel gelinta iskudhafka miinada), alxanka mesh mesh mze, mashiinka alxanka mesh alxanka alwaaxida, bir bir bir qalabka alxanka, mashiinka wax lagu karsado ee hexagonal, mashiinka birta la balaariyay, mashiinka siligga makiinada, mashiinka mesh diamond, mashiinka alxanka barta mashiinka iyo toosinta & goynta mashiinka.
Waxaan aaminsanahay tayada wanaagsan iyo adeegga ugufiican nolosheena. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa dhamaan asxaabta nala soo xiriirta! Mustaqbalka quruxda badan ayaa jira. Aynu wada qabanno!